Muwaaddin Soomaaliyeed oo lagu Maxkamadeynayo Dalka Maraykanka – Radio Daljir
Muwaaddin Soomaaliyeed oo lagu Maxkamadeynayo Dalka Maraykanka
Febraayo 22, 2019 12:37 g 0
Muwaaddin, Cabdi Yuusuf, ayaa lagu soo eedeeyay inuu Gacan weyn ku lahaa qafaalashada, Wariye, Michael Scott Moore, kaas oo muddo Saddex Sana ah lagu haystay Gobolka Mudug.
Michael Scott Moore, oo ah Jarmal haysta dhalashada Dalka Mareykanka, ayaa xilligii la Afduubanayay diyaarinayay war-bixinno ku saabsan Burcad-Badeedda Soomaaliya.
Cabdi Yuusuf, ayaa loo haystaa inuu maleegay shirqoolka lagu Afduubtay Wariyaha, isla markaana ku dhowaaqay dalab Madax furasho oo gaaraya 20 Milyan oo Doollar, waloow aan la caddeeyn in la siiyay iyo in kale.
Wariye, Michael Scott Moore, oo ahaa Suxufi madax bannaan, waxna ka qora arrimaha Burcad Badeedda ayaa lasii daayay, 23-kii September, 2014.
Sida ay sheegtay Maxkamadda Magaalada New York, Cabdi Yuusuf ,oo 51 jir ah, oo ku dhashay Magaalada Muqdisho, haystana dhalashada Maraykanka ayaa wajahaya dacwado kale oo ay ka mid yihiin Afduub iyo haysasho Hub Sharci darro ah.
Somaaliya oo horumar weyn ka gaadhay Ganacsiga|Taxanaha Q 13-aad (Daawo)